Mayelana Nathi - ASAKA Machinery Manufacturer & Supplier
I-ZHI XING MACHINERY (HANGZHOU) CO., LTD.
I-Zhi Xing Imishini ihlale ihambisana namakhasimende kuqala, igcina inkontileka, gcina umthetho wokuthembeka, ubambe isimo sengqondo esihle ukwanelisa ukufunwa kwamakhasimende.
Zhi Xing Imishini
Zhixing Imishini, etholakala edolobheni elihle Hangzhou, kuyinto umphakeli okhokhelwayo imikhiqizo ephakamisa. Imikhiqizo emikhulu yenkampani ifaka phakathi ukuphakamisa amabhande, ama-boist wezandla, ama-jacks kagesi, ama-jacks, amaketanga okubopha nezinye izinto zokuphakamisa. Imikhiqizo isidlulile i-CE, i-GS nezinye izitifiketi, futhi ihambisana nezindinganiso zomhlaba jikelele ezinjengezindinganiso zase-Australia naseMelika. Phakathi kwemikhiqizo yethu, amasilingi, izikhwepha ezenziwa ngezandla namajack kuncintisana kakhulu emakethe. Yimikhiqizo eyinhloko yenkampani yethu, ethole impendulo emakethe enhle. Inkampani yethu ineminyaka engaphezu kwengu-15 yesipiliyoni embonini yokuphakamisa kanye nezinsizakalo eziqinile zokuhlanganisa umkhiqizo nekhono lesisombululo. Inkampani yethu inolwazi lokuthekelisa emazweni angaphezu kwama-30, ngakho-ke sijwayelene kakhulu namazinga wokuthekelisa nezintandokazi zemakethe zokuphakamisa imikhiqizo evela eJapan, e-United States, e-United Kingdom, eJalimane, e-Australia, eSingapore, e-Indonesia nakwamanye amazwe. Amakhasimende ethu abandakanyeka ekwakhiweni kwemikhumbi, ekwakheni imikhumbi ethekwini, ezimayini nasensimbi, ukukhiqizwa kwemishini, ukutakulwa kojantshi, ezokuthutha, ukwenza insimbi, ukugcina amanzi, amandla kagesi, amandla omoya, ukwakhiwa, njll.
Inkampani yethu izibophezele ekuhlinzekeni amakhasimende ngemikhiqizo yokuphakamisa enokuncintisana futhi ezinzile, ngenkathi inikeza amakhasimende izinsizakalo ezisezingeni ezisebenza kahle kakhulu futhi ezingenakhathazeka. Inkampani yethu ilawula ngokuqinile ikhwalithi yemikhiqizo, futhi isebenzisa ngokuqinile ukuhlolwa kwesampula ngaphambi kokukhiqizwa kwenqwaba ngayinye yezimpahla, ukuhlolwa okungahleliwe kwenqubo yokukhiqiza, ukuhlolwa komkhiqizo ophelile ngaphambi kokuthunyelwa, nokuhanjiswa kwemibiko yokuhlola ngemuva kokuthunyelwa qinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo ngezinga elikhulu kakhulu.
Igama lenkampani yethu "Zhixing" lisho ukuthi inkampani inamathela kwifilosofi yobunye bolwazi nezenzo, iphatha wonke amakhasimende ngobuqotho nangokuthembeka. Akukho ukukopela, akukho ukufihla futhi akukho nzuzo. Silwela ukuba ngumlingani wakho othuthukile ozinzile, onqobayo futhi othembekile!